Shina: Maninona Ireo Bilaogera No Mangina Manoloana Ny Loza Voajanahary? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2017 15:49 GMT
Raha ny hita dia niha-nalaza hatrany hatrany tao Shina tao anatin'ny andro vitsivitsy ilay lahatsary napetraka tety anaty aterineto. Eny, tadiavin'ny olona ilay lahatsary. Mahaliana anareo ve ny fanadihadiana iray nataonà olon-tsotra izay tsy idiran'ny resaka politika no sady tsy lany andro? Ary ahoana ny momba ny toetrandro?
Ndeha hiverenantsika ny 56.com, ilay sehatra goavana indrindra ao Shina fametrahana lahatsary ety anaty aterineto. Toy ny Flickr, ny habaka omeny mba ho fandraisana anjaran'ny mpamaky dia matetika no ampiasaina –araraotina?– mba hisian'ny fifanakalozandresaka mivelatra kokoa. Raha halalinina ny fantsom-baovaon'ny 56.com, ny lahatsoratra fahadimy raha midina avy any ambony dia miaty lahatsary , saripika ary tatitra manokana avy amin'olona ka napetrany ety anaty serasera. Asan'ireo bilaogera va re izany, momba ny fandravàna ambongadiny hita manerana ny atsimon'i Shina – faritra izay misy ny 56.com any Guangzhou — tany am-piandohan'ity volana Jona 2007 ity? Tsia. Ireny lahatsary, saripika ary tatitra ireny, na eo aza ny fametrahana azy ireny tety anaty serasera tamin'ity herinandro ity, dia efa tamin'ny fahavaratra 2006, fony nandravarava ireo morontsiraka atsinanana sy atsimon'ny firenena i Saomai, ilay tafiotra nahery indrindra ntamin'izay nandalo tao Shina hatramin'ny nahaterahan'ny antoko kaominista [zh].
Araka izany dia aiza no hahitàna ireo bilaogy mivantana momba ilay loza voajanahary tamin'ny volana lasa? Nikaroka ihany ny mpanomponareo saingy niala maina. Mety hoe ampy va re ny fandrakofam-baovao nataon'ireo media Shinoa? Ny bilaogin-dahatsarin'ny “Project Disaster” toa tsy manome antsika afa-tsy lahatsary fanofanana sy ampahany tranainy avy amin'ireo fandaharana tao amin'ny fahitalavitra. Aiza ary no misy ny olana raha izany?